Fampidirana fandotoana rano maloto | Fiaretana haran-dranomasina
Loza mitatao ho an'ny olona sy ny fiainana an-dranomasina ny fandotoana ny rano maloto ary mahaforona isan-jato betsaka indrindra amin'ny fandotoana ny morontsiraka eran-tany. ref Manerantany, tombanana ho 80 isanjaton'ny rano maloto - izay misy ny maloto ataon'ny olombelona - dia alefa any amin'ny tontolo iainana tsy misy fitsaboana, mamoaka andiana loto maloto ao anaty ranomasina ary miteraka fahavoazana mivantana amin'ireo olona sy haran-dranomasina. ref Asehon'ny fikarohana fa ny fandotoana rano maloto dia matetika mitranga eo akaikin'ny haran-dranomasina manerana an'izao tontolo izao noho ny fitantanana rano maloto tsy misy na tsy ampy. ref
Terminology: rano maloto vs rano maloto
maloto ary rano maloto dia teny izay matetika ampiasaina mifanakalo, fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa. maloto (ny fakon'olombelona entina amin'ny alàlan'ny tatatra) dia singa iray lehibe amin'ny rano maloto, izay teny iraisan'ny rano ampiasain'ny vondrom-piarahamonina na indostria. Wastewater misy zavatra simba sy mihantona avy amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany, ara-barotra, na indostrialy ao anatin'izany ny akora simika, savony, metaly mavesatra, otrikaina ary effluent avy amin'ny rafitra maloto sy tsy voatahiry (toy ny tankin'ny fitsaboana septika).
Ekenay fa ny mpitantana an-dranomasina sy ny mpampiasa azy dia mety hahafantatra kokoa ilay teny maloto rehefa mandinika ny fiantraikany lehibe amin'ny haran-dranomasina, na izany aza, hampiasa ilay teny izahay rano maloto mandritra ny kitapo rehetra satria izy io dia mamaritra marina ny loharanom-pahalotoana isan-karazany izay misy fiantraikany amin'ny haran-dranomasina. Ny fampiasana terminology tsy miova dia manampy amin'ny fanamorana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra hafa, toy ny sehatry ny fahadiovana.
Fandotoan'ny rano maloto eran'izao tontolo izao
Na dia loharanom-pahalotoan'ny rano maloto aza ny tanàna amoron-tsiraka lehibe any amin'ny firenena ambany fidiram-bola, dia tsy afa-miala amin'izany ireo firenena be vola. Etazonia fotsiny isan-taona dia mamoaka galona 1.2 trillion mahery isan-taona effluent (ao anatin'izany ny rano maloto tsy voatsabo, ny rano mandriaka ary ny fako indostrialy) mankany anaty lalan-drano isan-taona. ref
Fandotoana rano maloto amoron-dranomasina voarakitra ao amin'ny faritra 104 amin'ny 112 miaraka amin'ny haran-dranomasina. Loharano: Wear and Vega Thurber 2015
Rehefa miditra amin'ny ranomasina ny rano maloto ary mifangaro amin'ny ranomasina dia miparitaka sy mihalefaka ny loto. Izany dia nanjary fiheverana maharitra fa "ny vahaolana amin'ny fahalotoana dia ny dilution". Saingy, ny fitomboan'ny loto maloto, tsy voafehy ary koa ny fitomboan'ny rano maloto dia mametra ny fahafahan'ny ranomasina manaparitaka ireo loto ireo ary mahatonga ny voka-dratsy ateraky ny fandotoana. Ny jeografia, ny isan'ny mponina, ny fotodrafitrasa ary ny fiovan'ny toetrandro dia mety hisy fiantraikany amin'ny hamafin'ireo fiantraikan'ny fandotoana rano maloto. Ny loto amin'ny rano maloto dia mety hiteraka ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy ranomasina nozarainay):
Ny fahasimbana ara-batana sy biolojika amin'ny haran-dranomasina, ahidrano ary honahona. ref
Ny fahaverezan'ny serivisy momba ny tontolo iainana amoron-dranomasina, toy ny fifehezana ny fikaohon-tany, ny fihanaky ny tafio-drivotra ary ny toeram-pitaizana zaza trondro. ref
Ny voninkazo algoma manimba izay mamono ny fiainana an-dranomasina, ny morontsiraka akaiky ary miteraka aretin'olombelona. ref
Aretin'olombelona sy biby vokatry ny pathogens, metaly mavesatra ary akora simika misy poizina. ref
Jono maloto, fitomboan'ny isan'ny trondro sy akorandriaka ary fihenan'ny fahasamihafana isan-karazany. ref
Fanadiovana sy rano maloto
Na dia eo aza ny fandrosoana, ny ankamaroan'ny mponina manerantany dia tsy manana fahadiovana ampy hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, tamin'ny taona 2020, 45% amin'ny mponina eran'izao tontolo izao no tsy nahazo niditra tamin'ny serivisy fitantanana madio, ary 6% no nanao maloto tampoka. ref
Fanapahana ny fandrakofana ny fidiovana arakaraka ny faritra (havia havia) ary ny famaritana ny tohatra fanadiovana (ankavanana ambony). Fandrakofana momba ny fidiovana manerantany manomboka amin'ny 2015-2020 (ambany). Loharano: JMP
Sektoran'ny rano, fanadiovana ary fahadiovana (WASH)
Ny fifandraisana amin'ny fako ataon'olombelona dia maneho fanamby maika ary nahatonga ny fampandrosoana ny sehatry ny rano, fidiovana ary fahadiovana (WASH). Ny sehatry ny WASH dia sehatra natokana hiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanomezana làlana madio amin'ny serivisy fisotro madio sy azo itokisana ary serivisy fanadiovana. Betsaka ny fikambanana miasa mifanaraka amin'izany tanjona izany, ao anatin'izany:
Masoivoho manerantany toy ny World Health Organization (WHO), United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF), ary ny Banky Iraisam-pirenena.
Maso ny governemanta toy ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) ary maso ivoho amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID).
Fikambanana tsy miankina toy ny WHO International Reference Center on Community Water Supply (IRC) sy Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA).
Na dia toa mampatahotra aza ny olan'ny fandotoana rano maloto, ny ezaka manerantany hamahana izany fanamby izany dia nitombo hatrany ny isan'ny olona nahazo ny fidiovana azo antoka tao anatin'ny dimy taona lasa. Ity fandrosoana ity dia azo omena amin'ny:
Fampitomboana ny fanekena ny maha-zava-dehibe ny fidiovana.
Fandrosoana ara-teknolojia amin'ny rafitra fanadiovana nohatsaraina, ary
Fikambanana maro kokoa manampy ny vondrom-piarahamonina hiditra amin'ireo rafitra ireo.
Rehefa mitombo ny fahatsiarovan-tena, ny fikarohana ary ny famatsiam-bola ary mihitatra ny ezaky ny sehatry ny WASH, ny mpitantana ny ranomasina dia afaka manampy amin'ny famolavolana ireo ezaka ireo mba hahasoa ny olona sy ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOcean Sewage Alliance - Torolàlana ho an'ny mpitsabo ho an'ny fahalotoan'ny rano maloto amin'ny ranomasina